Tag: wedzera | Martech Zone
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Sechiratidzo chepasirese, hauna kana vateereri vepasirese. Vateereri vako vanosanganisira vakawanda vematunhu uye vemunharaunda vateereri. Uye mukati meumwe neumwe wevateereri pane nyaya chaidzo dzekubata nekutaura. Idzo nyaya hadzingoite semashiripiti. Panofanirwa kuve nechinangwa chekutsvaga, kutora, wozovagovana. Zvinotora kutaurirana nekubatana. Kana zvikaitika, chishandiso chine simba chekubatanidza brand yako kune vateereri vako chaivo. Saka unoita sei
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Tikugashirei kune avo vezvekushambadzira matekinoroji ari kudaidza Iyo Mutengi Zvakaitika Era. Na 2016, 89% emakambani anotarisira kukwikwidza pahwaro hwechiitiko chevatengi, vs 36% makore mana apfuura. Kwayaka: Gartner Sezvo maitiro evatengi uye matekinoroji ari kuramba achichinja, ako marongero ekushambadzira zvemukati anoda kuenderana nerwendo rwevatengi. Zvinobudirira zvemukati izvozvi zvave kutungamirwa nezviitiko - riini, kupi uye sei vatengi vanozvida. Chiitiko chakanaka mune yega yega kushambadzira chiteshi ndeche
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Nepo iyo buzzword yekuona yekutaura nyaya ingave iri nyowani, iyo pfungwa yekuona kushambadzira haisi. 65% yehuwandu hwevanhu ruzhinji rwevadzidzi, uye hazvisi chakavanzika kuti mifananidzo, mifananidzo nemifananidzo ndezvimwe zvezvinhu zvinonyanya kufarirwa pasocial network. Vashambadziri vanotorwa kushambadza kunoonekwa nhanho inoenderera mberi nekuvandudza uye kukudza iyo pfungwa yekuona kutaura kwenyaya kwatiri kushandisa mifananidzo kutaura nyaya. Nei Nei Ruzivo rwekuona Ruchishanda? Sayenzi inotaura
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi ProofHQ ndeye SaaS-yakavakirwa pamhepo proofing software inojekesa kuongorora uye kubvumidzwa kwemukati uye zvigadzirwa zvekugadzira kuitira kuti kushambadzira mapurojekiti apedzwe nekukurumidza uye nekushomeka kushoma. Iyo inotsiva email uye yakaoma kopi maitiro, ichipa ongororo zvikwata maturusi ekushandira pamwe kuongorora zvemukati zvekugadzira, uye kushambadzira mamaneja eprojekiti maturusi ekutevera ongororo iri kuenderera. ProofHQ inogona kushandiswa kune ese midhiya kusanganisira kudhinda, dhijitari uye odhiyo / kutaridzika. Kazhinji, zvigadzirwa zvekugadzira zvinoongororwa uye zvinogamuchirwa zvichishandiswa
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Mune zvakapfuura zvinyorwa, takakurukura Izvo Dhijitari Asset Management Is, Nei Dhijitari Asset Management iri yakakosha kune Kushambadzira Kwose, pamwe neMabatiro Ekururamisa Iyo Mari yeDhijitari Asset Management. Mune ino infographic kubva kuWowanda, ivo vanotsanangudza iwo maratidzirwo emadhijitari emafaira manejimendi achakubatsira iwe kuendesa yakanyatsoita gadziriso manejimendi manejimendi. Kunyanya, dzimba uye kuongorora zvemukati mune repakati repositi zvinonyanya kushanda pane kuve nezvakapararira mukati